थाहा खबर: 'प्रधानमन्त्रीलाई पहिल्यै हटाउनुपर्ने, हाम्रो नेतृत्वको भित्री साँठगाँठ के हो थाहा छैन'
'प्रधानमन्त्रीलाई पहिल्यै हटाउनुपर्ने, हाम्रो नेतृत्वको भित्री साँठगाँठ के हो थाहा छैन'
काठमाडाैं : नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र आफ्नै पार्टीको सभापति मिलेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने कर्तव्यबाट विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस च्युत भएको टिप्पणी उनले गरे। उनले पार्टीले संस्थागत रुपमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसक्दा पनि नेतृत्वले त्यसतर्फ पहल कदमी नगरेको भन्दै उनले राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता दुवैको नेतृत्वमा रहेकाहरूबाट लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई उलंघन गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरे।
बिहीबार बिहान न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको मात्रै नभई पार्टी नेतृत्वको पनि चर्को आलोचना गरे। उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दिशामा अग्रसर भएको आरोप लगाए। गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चा सांसद संसदमा सत्तारुढ दलले गरेको घृणित कामको विरोध गर्न सबैलाई अपिल पनि गरे। प्रस्तुत छ, नेता पौडेलसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश।
अहिले कोभिड-१९ को दोश्रो लहर चलेको छ, सरकारको तयारीबारे तपाईको प्रारम्भिक टिप्पणी के छ ?
आजभन्दा ३ हप्ता अगाडि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक गर्नुभएको थियो। त्यत्ति बेला नै मैले सरकारलाई भनेको थिएँ। अब तुरुन्तै तयारीमा जुट्नुपर्यो। आईसियु, भेन्टीलेटर बढाउनुपर्यो। हस्पिटलहरूको प्रबन्ध राम्रो गराउनुपर्यो। स्वास्थ्य उपकरण, सुरक्षा उपकरणहरुको व्यवस्था तुरुन्त गरि हाल्नुपर्यो। र सिमानामा व्यवस्थित गर्ने काम सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्यो भनेर त्यो बेलामा नै सुझाव दिएको हो।
तर त्यो सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन। त्यसले गर्दा अहिले आईसियु वेड अभाव, भेन्टिलेटरको अभाव भईरहेको छ। सिमाबाट मानिसहरु अन्धाधुन्ध प्रवेश गरेर, सिमानामा चेक नभएर गाउँमा पसेर रोग फैलाउने काम भईरहेको छ। यो राज्यको लापरवाही हो। यसले गर्दा जनता कोभिडको मारबाट त्रसित भएका छन्।
अब पार्टी राजनीतिको कुरा गरौ, पार्टीका नेता र कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक नै स्थगित भयो। के भन्नुहुन्छ ?
यो बैठकको बारेमा मेरो उपसभापतिसँग कुरा पनि भयो। मैले त्यत्ति बेलै भनेको थिएँ, सानो सानो निहुँमा महाधिवेशनको मुखमा आएर कति महत्वपुर्ण निर्णयहरु गर्नुपर्नेछ। महाधिवेशनलाई असर पार्ने कुराहरु छन् अहिले मिटिङ किन स्थगित गर्ने भन्दाखेरी उहाँहरुले तपाईं संवेदनशील हुनुभएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले भनेँ–संवेदनशील त किन नहुनु ? तर डिस्टेन्स राखेर अन्त त काम त चलाइराखेकै छन् नि त। राज्य सरकार पनि त चलिराखेकै छ।
क्याबिनेटका मिटिङहरु पनि भइराखेकै छन्। हाम्रो कार्यसमितिलाई अलिकति डिस्टेन्स मिलाएर, एक दुई जना जसलाई देखिएको छ उनीहरु बाहिर बसेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सञ्चालन गरौं भन्दा रोकिएको छ। मैले ३ बर्ष अगाडि नै हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनका लागि आउनसक्ने समस्याहरुलाई बुझेर नै अहिलेदेखि नै कार्यतालिका बनाएर काम गर्न थालौं। हामीले समयवद्ध भएर काम गरौं भनेर कार्यसमितिमा पनि महासमितिमा पनि प्रस्ताव राखेकै थियाैँ।
तर त्यो बेलामा त्यसलाई महत्व दिइएन। त्यसलाई पन्छाउने कुरा गरियो। आज आएर साढे ५ बर्षमा अधिवेशन हुन्छ भनेर सभापतिले त्यही बेलामा जसरी भन्नुभयो र मेरो प्रस्तावलाई तर्काउनुभयो। यत्रो संकटमा हामी पुगिसकेका छौ।
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको लोकतन्त्रमाथि यत्रो खेलबाड भईरहेको छ। सत्ता हत्याएपछि, सत्तामा पुगेपछि, चाहे त्यो पार्टीको सत्ता होस् चाहे त्यो राज्यको सत्ता, जब सत्तामा पुग्छन् अनि त्यहाँ बसेर अन्धाधुन्ध कमिसनको खेल चल्छ। अर्बाैँका खेलहरु हुन्छन्। जसरी पनि आफू सत्तामा टिकिरहने, जसरी पनि सत्तालाई आफ्नो ग्रिपबाट उम्कन नदिने र लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र नैतिकता भन्ने कुरा केही पनि नराख्ने।
प्रधानमन्त्री आफुले गरेको विघटन (प्रतिनिधिसभा)लाई जब अदालतले फर्काइदियो उहाँ एक मिनेट बस्नु हुन्थेन। उहाँले तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। उल्टो उहाँ नकचरो भएर के भनिरहनुभएको छ भने – यो संसदको के काम? यो त विकृति ल्याउँछ। विकृति कसले ल्याइरहेको छ? विकृति त अहिले सत्तामा रहेका मुठ्ठीभर केही नेताहरु, चाहे पार्टी सत्ता होस्, चाहे केन्द्रीय सत्ता होस्, सरकारको राज्यसत्ता होस्, तिनीहरुले देशमा विकृति ल्याएका छन्।
चुनावमा जानुपर्छ, यो संसद काम छैन भन्ने प्रधानमन्त्री अहिले पोखरामा के गर्दैछन्? ५ नम्बर प्रदेशमा के गरे? लुम्बिनीमा के गर्दैछन्? यहाँ केन्द्रमा के गर्दैछन्? अनहोली (अप्राकृतिक गठबन्धन) एलाइन्स गर्दैछन्। लोकतन्त्र भनेको त मर्यादापूर्ण व्यवस्था हो। जीवनपद्धति हो तर त्यतापट्टि त वास्तै छैन। मुल्य मान्यताप्रति वास्तै छैन। देश र जनतामा के असर पर्छ भन्ने वास्तै छैन। आम जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम नेताहरुले गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टीभित्र पनि देशको राज्यसत्ता भित्र पनि अहिले जुन खेलहरु भईरहेको छ, यसले चिन्तित बनाएको छ मलाई।
तपाईको बुझाई हाम्रा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यासहरू अंगिकार गर्नुपर्ने कुराबाट नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै च्युत हुँदैछन् भन्ने हो ?
पार्टीभित्र परेको खटपटलाई आधार बनाएर जसरी प्रधानमन्त्रीले संसदमाथि प्रहार गर्नुभयो, संविधानमाथि जसरी प्रहार गर्नुभयो र उहाँले चालेको कदमपछि गलत सावित भयो। त्यो कदम गलत सावित भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्तै राजीनामा गर भन्नुपर्ने र राजीनामा नगरेपछि अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुपर्ने थियो।
संख्या जतिसुकै होस् कर्तव्य र दायित्व त पुरा हुन्थ्यो नि। हामी चाहिँ यहाँ जोखाना हेरेर बस्ने? जोखाना हेरेर बस्दा पहिलो अवसर गुम्यो। जुन बेलामा एमाले र माओवादी बनाएर अदालतले फैसला गरेको थिएन। त्यो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी आफैंमा विभाजित भएर बहुसंख्यकले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए। त्यो बेला नै कांग्रेसले हाल्नुपर्ने (अविश्वासको प्रस्ताव) थियो।
त्यो बेलाको अवसर गुम्यो। त्यो अवसर जानी जानी गुमाइयो। के हो भित्र साँठगाँठ थाहा छैन। त्यसपछि अहिले पनि पछाडि आएर कांग्रेसले जसरी तदारुकताका साथ धर्म निभाउनुपर्थ्यो, हाम्रो नेतृत्वले त्यो धर्म निभाएको छैन। त्यो क्रियाशीलता र कर्तव्यपरायणता देखाएको छैन। हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने केपी ओलीलाई राजीनामा गर्न लगाउने अथवा हटाउने भनेर हाम्रो पार्टीमा हामीले निर्णय त गर्यौं।
केपी ओली हटाउने भनेर पार्टीले निर्णय गर्ने, पार्टी नेतृत्वले चाहिँ आलटाल गरेर बस्ने काम भयो। त्यसो भएको हुनाले मैले के देखिराखेको छु भने– जो नेतृत्वमा छन्, राज्यको नेतृत्वमा अथवा पार्टी नेतृत्वमा उनीहरु लोकतान्त्रिक मुल्य मर्यादाप्रति संवेदनशील भएनन्। उनीहरुलाई आफ्नो सत्ताको मात्रै चिन्ता भयो। त्यसले गर्दा मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि चिन्ता छाउन थाल्यो। यो अहिलेको चिन्ताको विषय हो।
कोभिडका कारण महाधिवेशनका कार्यतालिकाहरू क्रमशः प्रभावित हुदै जान्छन्, भदौमा महाधिवेशन नगर्दा वैधानिक रुपमा नै कांग्रेस रहन्न, महाधिवेशन गर्ने बाटो के हुन्छ त ?
वैधानिकता र अवैधानिक बारे हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले परवाह नै गर्न छोड्यो। यस्ता कुरामा चिन्ता नै भइराखेको देखिन्न। हाम्रो पार्टीको कार्यकाल सकिएको त डेढ बर्ष भइसक्यो। अहिले पनि मानिसहरुलाई चिठ्ठी काटिँदै छ। नियुक्ति बाँडिँदै छ। देशभरी त यो विभागको, प्रतिष्ठानको,उपशाखाको सदस्य भइस् भन्दै मान्छेहरूलाई अन्धाधुन्ध अवैधानिक तरिकाबाट पत्र काट्ने काम भईरहेको छ।
अहिले पनि भ्रष्ट र विकृत तरिका अपनाएर पद दिएर आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउने घिनलाग्दो खेलहरु चलिराखेको छ। अहिले सबै क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यता वितरण भयो तर जहाँ सभापति र उपसभापतिको प्रभाव छ त्यहाँ खेल भयो। पार्टी प्रवेशको नाममा मनपरी ढंगले क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने कब्जा गर्ने खालको नियत देखिएको छ। त्यसैले यो पार्टी कसरी बचाउने भन्ने संकटमा हामी छौ।
पार्टी सभापतिलाई दोष लगाएर मात्रै त हुँदैन होला नि ! उहाँलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउनुहुन्छ त?
पार्टीलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि हामीले गर्ने कुरा गरिरहेका छौं तर नेतृत्वले ठिक ढंगले अधिवेशन गराउने कुरामा इमान्दारीता नदेखाउने हो भने हामी मात्रै बाहिर कराएर अधिवेशन समयमा समयमा सम्पन्न नहुन सक्छ।
अधिवेशन समयमा सम्पन्न नहुँदा हाम्रो पार्टीको वैधानिकता नै संकटमा पर्छ। पार्टी विधानमा त संकट परिसक्यो। पार्टीको विधानले त हामी सदस्य नै होइनौँ। शेरबहादुरजी सभापति पनि होइन। म केन्द्रीय सदस्य पनि होइन। अब देशको संविधान अनुसार भदौ भन्दा उता हामी कोही पनि सदस्य रहँदैनौ। कोही पनि पदाधिकारी रहँदैनौ। हाम्रो कुनै पनि दाबी पार्टीमा हुँदैन।
त्यसकारण अराजक स्थिति जन्मन्छ। त्यस्तो अवस्था आउँछ भने वैकल्पिक उपाय सोच्ने कुरा हामी विचार गर्दैछौं। अहिले म भन्दिनँ कुन चाहिँ वैकल्पिक हुन्छ भनेर तर पार्टीको अस्तित्व त बचाउनुपर्यो। नेपाली कांग्रेस त यो देशमा बच्नुपर्यो। लोकतन्त्रको पहरेदार नेपाली कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता अनुसार बचाएर राख्ने कुरामा हामी प्रयत्न गर्छौ।
तपाईहरुले आफु पक्षमात्र हो कि केन्द्रीय समितिमा बैकल्पिक बाटो के हुन्छ भनेर छलफल गर्नुभएको छ ?
केन्द्रीय समितिमा कुनै छलफल भएको छैन। हुन त मैले आफ्ना कुरा समितिमा थोरै प्रवेश त गराएको छु। अहिले विकल्पबारे छलफल गर्ने बेला भएको छैन। अहिले त यही अधिवेशनलाई नै सम्पन्न गर्नेमा हामी छौँ।